「27 istudiyo」INS感性#Hanfeng Homestay China Resources Vientiane City/HD Uqikelelo/Umbono wobusuku obuphezulu/Wanda Plaza
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe ongu饼
molo, enkosi ngokukhetha indawo yam yokuhlala.
Indawo yokuhlala ikwindawo yokuhlala yaseVientiane City, eyisithili seshishini saseVientiane esisezantsi. I-Wal-Mart, Hey Tea, eyenziwe nguMakhulu ngesandla, i-KFC, i-Starbucks, i-Xiaolongkan kunye nezinye iivenkile ezinkulu zesebe, indawo yokutyela, imiboniso bhanyabhanya emnandi inayo yonke into!
Njengesithili soshishino esibalulekileyo, itrafikhi nayo iphuhliswe kakhulu. Ezantsi kukho isikhululo sebhasi.Kulula kakhulu ukukhwela iteksi ukuya kwiSitrato se-Five-Star Commercial Pedestrian, BBK kunye nedolophu yaMandulo yaseYaobu. Unokuhamba ngeenyawo ukuya eWanda Plaza.
Ukuba ukhetha ukuhamba ngemoto, kukho indawo yokupaka enkulu engaphantsi komhlaba ezantsi kwisiXeko saseVientiane, eneendawo ezininzi zokupaka. Kwaye kukho iipatroli zokhuseleko zeeyure ezingama-24 zokuqinisekisa ukhuseleko lwakho lokuhamba.
Kukho iiprojektha, ii-air conditioner, izifudumezi zamanzi, iifriji nezinye izinto ezifumaneka kwindawo yokuhlala, kukho iitawuli, iibrashi zamazinyo, iishampoo, iiconditioners, iijeli zeshawa, ezomisi enwele, iithishu, iislippers, iibhotile zamanzi ashushu nezinye izinto. Ndiyathemba ukuba ungaba nohambo olumnandi!
Ukuba unazo naziphi na iimfuno, ungaqhagamshelana nomnini-mhlaba nangaliphi na ixesha.
한국어 가능합니다!편하게 문의하세요.
Igumbi elinye lokulala kunye negumbi lokuhlambela elinye
Ifumaneka kwisithili seshishini saseVientiane City, iivenkile ezinkulu zesebe, ukutya kunye nokuzonwabisa, ukuthutha okufanelekileyo kunye nezixhobo ezipheleleyo. Hamba uye eWanda Plaza. Ukudubula kwezorhwebo kwamkelekile.
Umbuki zindwendwe ngu- 饼
Iindwendwe ezihlalayo zinokuqhakamshelana nangaliphi na ixesha ukuba zifuna izikhokelo zokuhamba!
Iilwimi: 中文 (简体), English, 한국어
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$31
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Liuzhou